RAR Mmezi Ngwá Ọrụ. RAR Iweghachite Software. Idozi RAR Faịlụ.
DataNumen RAR Repair bụ kasị mma RAR ịrụzi na mgbake ngwá ọrụ na ụwa. Ọ nwere ike ịrụzi ndị rụrụ arụ RAR edebe ihe ochie ma weghachite data gị dị ka o kwere mee, si otú ahụ na-ebelata ọnwụ na nrụrụ faịlụ.
4.90 / 5 (site na 1,600 votes)
Gịnị mere DataNumen RAR Repair?
Iweghachite bụ most njirimara dị mkpa nke a RAR ngwaahịa mgbake. Dabere na ule zuru oke anyị, DataNumen RAR Repair nwere ọnụọgụ mgbake kachasị mma, dị mma karịa ndị asọmpi ndị ọzọ, gụnyere WinRAR na ndị ọzọ na RAR rụkwaa ngwaọrụ, n'ahịa!
Mụtakwuo banyere otu DataNumen RAR Repair na-ese anwụrụ mpi
Enweghị m nsogbu na progremm a pụtara ìhè. Okwu nye ndi ahu nwere ike nwee nsogbu ufodu. Ọ bụrụ na 'DataNemen Rar Mmezi 'Mmemme
M ga-abụ karịa obi ụtọ ịhapụ ndepụta-azụ banyere m mma njikọ aka nke gị ngwaahịa _ ụfọdụ ndụmọdụ kwa ka nnọọ occassional ọdịda nke
Main Akụkụ na DataNumen RAR Repair v3.5
Nkwado ịrụzi nsụgharị niile nke RAR na faịlụ SFX.
Nkwado iji weghachite ọtụtụ olu na ebe nchekwa siri ike.
Nkwado iji nwetaghachi ihe ochie ezoro ezo site na paswọọdụ.
Nkwado ịchọta ma họrọ RAR na SFX archives ka a rụzie na kọmputa mpaghara.
Nkwado ịrụzi RAR faịlụ dị na mgbasa ozi rụrụ arụ, dị ka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịrụzi otu ogbe RAR na faịlụ SFX.
Nkwado ịrụzi RAR ebe nchekwa dị ka 8, 388, 608 TB (ntụgharị 8, 589, 934, 592 GB).
Nkwado mwekota na Windows Explorer, yabụ ị nwere ike ịrụkwa a RAR Archive na onodu menu nke Windows Explorer mfe.
iji DataNumen RAR Repair iji weghachite mebiri emebi RAR Archive
mgbe gị RAR Archive mebiri emebi ma ọ bụ mebie n'ihi ọtụtụ ihe ma ị nweghị ike imeghe ya nke ọma, ịnwere ike iji ya DataNumen RAR Repair i scanomi ihe RAR Archive na naghachi faịlụ na ya dị ka o kwere mee.
Cheta na: Tupu na-agbake ọ bụla mebiri emebi ma ọ bụ rụrụ arụ RAR Archive na DataNumen RAR Repair, biko mechie WinRAR na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike ịnweta RAR Archive.
Họrọ ndị mebiri emebi ma ọ bụ ndị rụrụ arụ RAR Archive-arụzi:
Nwere ike itinye ihe na RAR Archive aha ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ Archive. I nwekwara ike pịa bọtịnụ chọta RAR edebe ihe nchekwa na kọmputa mpaghara.
Site na ndabara, DataNumen RAR Repair ga-agbake ma wepu fa? l? RAR Archive n'ime ndekọ a na-akpọ xxxx_recovered, ebe xxxx bụ aha isi mmalite RAR Archive. Dịka ọmụmaatụ, maka isi mmalite RAR Archive mebiri emebi.rar, ndabara mmepụta ndekọ ga-Damaged_recovered. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
Nwere ike itinye aha ndekọ ndekọ aha ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ ndekọ na.
pịa bọtịnụ, na DataNumen RAR Repair ga start na-enyocha ma na-arụzi isi iyi ahụ RAR faịlụ. Ogwe ọganihu
Mgbe mmezi usoro, ọ bụrụ na isi iyi RAR Enwere ike idozi faịlụ ahụ nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a ị nwere ike imeghe ndekọ ndekọ akọwapụtara na usoro nke 3 ma lelee faịlụ ndị enwetara na ya.
DataNumen RAR Repair A tọhapụrụ 3.5 na Mee 3, 2021
DataNumen RAR Repair 3.2 weputara na Disemba 18th, 2020
DataNumen RAR Repair A na-ahapụ 3.0 na November 4th, 2020
DataNumen RAR Repair A na-ahapụ 2.9 na Septemba 9, 2020
Melite nhazi nke temporary faịlụ.
DataNumen RAR Repair A na-ahapụ 2.8 na Eprel 19, 2020
Mee ka mgbake ahụ dịkwuo mma na ọnụego mgbake.
DataNumen RAR Repair A na-ahapụ 2.7 na November 18th, 2019
DataNumen RAR Repair A na-ahapụ 2.6 na July 24th, 2019
DataNumen RAR Repair A tọhapụrụ 2.5 na June 28, 2018
DataNumen RAR Repair A na-ahapụ 2.3 na Eprel 20, 2018
Melite mgbake maka ezoro ezo RAR ebe nchekwa.
DataNumen RAR Repair A na-ahapụ 2.2 na Sep 19th, 2016
DataNumen RAR Repair A tọhapụrụ 2.1 na Septemba 14, 2013
DataNumen RAR Repair 2.0 wepụtara na July 6, 2013
Nkwado merieRAR v5.x.
Degharịa aha onye ọrụ.
DataNumen RAR Repair A na-ahapụ 1.2 na Sep 27th, 2006
Nkwado bulite rụrụ arụ RAR ma ọ bụ nchịkọta SFX na sava ftp anyị.
Nkwado iji weghachite akwụkwọ ndekọ aha na RAR ebe nchekwa.
Melite njehie mgbake usoro.